Nri Ketogenic | Ọkọwa Okwu Ahụike
7 Uru Ahụ Ike Dị ala nke nri Carb na Ketogenic
Nri Ketogenic / Low Carb enwetawo ewu ewu na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ pụtara napụta nsonaazụ n'ọtụtụ ihu. Nri bụ oke abụba, protein zuru oke, nri na-enye obere carbohydrate. Ihe oriri na-eme ka anụ ahụ sie abụba karịa carbohydrates. Nri ndị a nwere ike melite cholesterol, ọbara mgbali elu ma mee ka ọmarịcha ọbara. Ha nwekwara ike kwụsịlata agụụ gị, nyere gị aka ịbelata oke ma gbochie ma ọ bụ nwee ike ịkwụsị ọrịa shuga / ọrịa shuga. (2dị XNUMX)
Nri Detox: Gini mere Naanị Nri Anya Anyi 1? Gbalịa 4 ndị a
Gini mere Inwe nri eji egbu nri nke 1, mgbe Inwere ike 4, Dika Nke Nri nri Detox gi.
Iri ihe ọ Juụ Juụ Juice na-enweta ewu ewu dị ka nnukwu ụzọ iji kwụsị. Ọtụtụ ndị nwere mmasị ịpụ nsí na sistemụ ha ka ha wee bie ndụ ahụike. Mgbe nsí na-aba ụba n’ahụ, ha na-adị umengwụ ma nweekwa usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Gịnị bụ Ngwọta Cinderella?
Mmemme Ngwọta Cinderella lekwasịrị anya na ntụgharị ICE nke na-atụgharị n'echiche na enwere ụfọdụ adịghị agbanwe agbanwe nke homonụ insulin. Ihe omume a na-akuziri ụmụ nwanyị etu ha ga-esi bi ogologo ndụ ha niile maka iri ezigbo ahụike. Usoro ahụ na-arụ ọrụ na atụmatụ ibu na mmega ahụ maka ụmụ nwanyị karịrị 30 ndị chọrọ ida karịa kilogram iri.
Edema - Ezi ọgwụgwọ & ọgwụ
Edema bụ ihe ana - ahụ anya site na nchịkọta mmiri site na anụ ahụ. Ọ na - apụtakarị n'ụkwụ na n'ụkwụ, a makwaara ya dị ka akụkụ ugwu.